RIPPERS / THUMBS / RAKES mpanamboatra sy mpamatsy - China RIPPERS / THUMBS / RAKES Factory
Fizarana telo FAHATOROHAN'NY BOMBY & ARM
BONOVO fanao am-paosy bucket Loader Attachm Attachm ...
BONOVO ODM OEM PIN-ON hydraulic thumb thumb buckton faritra fananganana
Bonovo Pin-on Hydumb Thumb namboarina tamina milina manokana. Miasa mahomby amin'ny milina kely kokoa ary koa amin'ny milina lehibe. Volavola mifangaro amin'ny takelaka sy ny rantsan-tànana hahazoana tanjaka bebe kokoa, serration amin'ny rantsantanana manokana ho an'ny fitomboan'ny fahaizany mitazona.
BONOVO Factory vidin'ny marika vaovao manadio ny tanimbary mikarantsana ho an'ny excavator 1-100 taonina
Bonovo Rake dia mety amin'ny fanadiovana haingana, fitantanana zavamaniry, fanasivanana ny tany / vatolampy ary fanesorana ireo kirihitra sy fambolena tsy maniry. Azo sivana sy milahatra ny fitaovana mba hamafana ireo potipoti-javatra tsy ilaina ary hamela ny tany na fitaovana tsara ao aoriany. Samy amin'ny lalana mivadika sy mandroso.
BONOVO Backhoe mechanical thumb ho an'ny ambongadiny sy ny antsinjarany
Bonovo Mechanical Thumb dia manome fomba mahomby sy mora amin'ny fikirakirana ny vatolampy, borosy, vatan-kazo, fantsom-pitaovana ary fitaovana sarotra alain-tahaka. Maka sy mametraka toerana misy fifehezana tanteraka. Ity no fitaovana ilaina amin'ny fandrodanana, ny fanesorana ny tany ary ny asa rehetra fakana. Ny karazana mekanika, hydraulic, weld-on ary bolt-on dia misy daholo.
BONOVO Excavator link-on thumb thumb ho an'ny mpitrandraka digger mini
Bonovo Link-on Hydraulika Thumb dia nifanaraka tamin'ny bikan'ny sininao ary vita tamin'ny vy mahery. Misy karazana modely misy. Fihodinana 145 hatramin'ny 180.
Bonovo vao noforonina ary miaraka amina asa fanoloana vato 2 ka hatramin'ny 85 taonina
Bonovo Rock Ripper dia afaka mamaha ny vatolampy, tundra, tany mafy, vatolampy malefaka ary vatolampy vaky. manamora ny famokarana tany mafy io ary mamokatra kokoa. Ny Rock Ripper dia fifamatorana tonga lafatra hamakivakiana faritra sarotra, izay sendra ny tontolon'ny asanao.
Ny ravina Rock Bonovo dia tokony noforonina hamakivakiana sy hamakiana ny faritra mafy indrindra amin'ny alàlan'ny fanamorana mora ny famiravirana mahomby amin'ny toe-javatra isan-karazany. Hijery ny bika rehetran'ity matoanteny ity eo amin'ny Raki-bolana Volapoky eto amin'i Wikibolana. Midika izany fa hataonao mora kokoa ny tadiny ary tsy asiana entana be loatra ao amin'ilay milina.